लेखराज भट्टको अर्को काण्ड बाहिरियो के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
लेखराज भट्टको अर्को काण्ड बाहिरियो के हो यथार्थ ?
काठमाडौ। नेकपा माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रबेश गरेका सुदुरपश्चिमका नेता लेखराज भट्टले दुई जना श्रीमती राखेको पाइएको छ । पहिलो श्रीमतीमा थाइराइडको समस्या देखिएपछि सन्तान जन्माउनकै लागि दोश्रो विहे गरेको श्रोतको भनाई छ ।
पहिलो श्रीमतीबाट जनयुद्धको समयमा नै एउटा छोरा जन्मिएको थियो । उनको पहिलो सन्तान खेर गएपछि पहिलो श्रीमतीबाट कुनैपनि सन्तान जन्मिएन । त्यपछि उनले दोश्रो विवाह गरे । भट्टले २०७२ सालमा ५७ वर्षको उमेरमा ताप्लेजुङकी ३० वर्षीय युवती विष्णु आचार्यसँग गोप्य रुपमा दोस्रो विवाह गरेका थिए । उक्त विवाहपछि माओवादीमा भट्टको चर्को आलोचना भएको थियो ।
उनी उद्योग मन्त्री भएका बेलामा कान्छि श्रीमतीलाई मन्त्री क्वाटरमा राखेका थिए भने जेठी श्रीमती ललितपुरको आफ्नै घरमा बसेकी थिइन् । मन्त्री भएका बेलामा हरेक शुक्रबार जेठी श्रीमती भेट्न जाने गरेका थिए ।
माओवादीबाट पटक–पटक मन्त्री भएका भट्टमाथि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लोपटक उद्योगमन्त्री हुँदा पनि मदिरा व्यवसायी, एनसेल, सुपारी तस्करहरुबाट करोडौं रकम उठाएको आरोप छ ।
नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज रहेका भट्टमात्र होइन, सहइन्चार्ज नारदमुनि राना, अध्यक्ष कर्ण थापादेखि जिल्ला अध्यक्ष रतन थापासम्मलाई बहुपत्नीको प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ । उनीहरु भन्दा तलका नेता–कार्यकर्ता पनि बदनाम हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सहइन्चार्ज नारदमुनी राना पनि बहुविवाहमा मुछिएका नेता हुन् । कान्छिलाई आफूसँगै डुलाउने र जेठीलाई चुलाचौकामा थन्काएको भन्दै रानाको आलोचना हुने गरेको छ । २० लाख रुपैयाँमा रातो पासपोर्ट बेचेको विषयमा रानामाथि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा छ ।
कर्ण थापाकी जेठी श्रीमती बाजुरामा घाँस दाउरा गरेर दिन बिताइरहेकी छन् भने, यता कमला ओली काका केपीको कृपाले आधा करोडको गाडी र लाख बढी तलब सुविधासहित सूचना आयोगमा माननीय सदस्यको रुपमा नियुक्ति खाइरहेकी छन् । यस्तै जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा पनि दुई स्वास्नी स्याहार्ने नेता तथा प्रदेश सांसद हुन् । कान्छी स्वास्नी टीका लम्कि चुहा नगरपालीकाको उप मेयर छन् ।
मदिराको तालमा रहेको अवस्थामा गत वर्ष एक महिलासँगको कैलालीका अध्यक्ष दिर्घ सोडारीको अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । उक्त प्रकरणमा ओलीले उनलाई निलम्बन गरेका थिए । सोडारीको निलम्बनपछि रतन थापा अध्यक्ष भए ।
केही समयपछि थापाको पनि महिलासंगको आपत्तिजनक संवाद अडियोका रुपमा भाइरल भयो । तर, थापालाई कुनै कार्वाही भएन । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा सोडारीलाई पेलेको र थापालाई जोगाएको भन्दै रावल पक्षले तीव्र आलोचना गरेको थियो । सोडारी रावल पक्षधर हुन् ।
यसरी पार्टी टुक्राटुक्रा भएका बेला सुदूरपश्चिममा हतारले बदनाम भएका नेताहरुबाट ओली नेतृत्वको एमालेको संगठन निर्माण कतिको प्रभावकारी होला ? र, आगामी निर्वाचनमा जनताले कसरी पत्याउलान भनेर सुदूरपश्चिमका इमान्दार र स्वच्छ छवि भएका कार्यकर्ताहरु चिन्तित देखिएका छ्न् ।
नेकपा एमालेलाई अर्को झट्का लागेको छ । प्रदेश २ मा नेकपा एमालेका थप दुई जना प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि अर्को झट्का लागेको हो । सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङले आइतबार जनकपुरधामस्थित प्रदेश निर्वाचन आयोग कार्यालय पुगेर एकीकृत समाजवादी दल रोजेका हुन् ।
दुबै जनाले सनाखत गरिसकेको एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुंगेलीले बताइन् । यसअघि गत बिहीबार एमालेका १० जना सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए । प्रदेश २ मा नेकपा एमालेको २१ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकामा एकीकृत समाजवादी रोज्नेको संख्या १२ पुगेको छ ।
यसअघि एमालेका सांसदहरु शत्रुद्यन महतो, गोविन्दबहादुर न्यौपाने, प्रमोद यादव, अशोककुमार यादव, मंजु कुमारी यादव, बेची लुंगेली, रबीन्द्र बैठा, नागेन्द्र राय यादव, हसिमा खातुन र मनोज सेन श्रीवास्तवले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी रोजेका सांसदहरुले भने हाल उपचारका क्रममा दिल्लीमा रहेका सांसद डिल्ली उप्रेतीले पनि एकीकृत समाजवादी रोज्ने दावी गरेका छन्।
यसै गरि नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताका लागि भएको १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् । अदालतले नेकपा एमालेलाई कानुनी रुपमा २०७५ जेठ २ मा फर्काए पनि जेठ २ को अवस्था यान्त्रिक ढङ्गले नहुने बताएका हुन् ।
नेकपा एमाले मोरङले आइतबार मोरङको विराटचोकमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले जेठ २ को कार्यान्वयन सिर्जनात्मक रुपमा हुने बताए । ‘१० बुदे कार्यदलले दिएको सुझाव हो पार्टीको निर्णय होइन।
उनले भने,‘‘कार्यान्वयन गरिरहँदा यो यान्त्रिक ढङ्गले हुँदैन्, हुनसक्दैन, सिर्जनात्मक ढुङ्गले हुन्छ ।’ उनले १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरे । पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काए नयाँ पार्टीबाट आएकाहरुलाई अन्याय हुने बताए ।
२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी रुपमा जेठ २ मा पुग्यौं,’ उनले भने,‘‘यसलाई यान्त्रिक ढङ्गले बुझ्न हुदैन, २०७५ साल जेठ २ फेरि त्यही अवस्थामा जस्ताको तस्तै आउन सक्दैन, कोही कमरेड भ्रममा नपरे हुन्छ ।’ महासचिव पोखरेलले हिजोका दिनमा पार्टीको जिम्मेवारी लिएका र पार्टीमै रहेकाहरुलाई समेटेर जिम्मेवारी दिइने बताए ।